Dr. Tint Swe's Writings: November 2015
ဆရာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုန်း ဓါတ်ပုံမရုိုက်ကောင်းဘူးလို့ လူကြီးတွေပြောတာ ကြားဖူးနေလို့ပါဆရာ။ ဓါတ်ပုံရုိုက်တာ ကလေးကို ဘာတွေထိခိုက်စေနိုင်ပါသလည်းဆရာ။
ဒီလိုမေးခွန်းကို အရင်ဆရာဝန်တွေကမဖြေရဘူးပါ။ ကင်မရာနဲ့တွဲထားတဲ့ဖုန်းတွေပေါ်လာမှာ ဒီအမေးပါပေါ်လာတယ်။ ဖုန်နဲ့အတူကင်မရာပေါ်တဲ့သမိုင်းက ၁၉၉ဝ ကျော်ကနေစတယ်။ (ကင်နွန်) ကနေ ၁၉၉၇ မှာစသုံးလာတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာနေတဲ့ နည်းပညာတီထွင်သူပညာရှင် Philippe Kahn (ဖိလစ် ခန်း) ကနေ ၁၁-၆-၁၉၉၇ နေ့မှာ သူ့သမီးလေးမွေးလာတာကို ချက်ချင်းဖုန်းကင်မရာနဲ့ရိုက်ပြီး လူ ၂ဝဝဝ ကျော်ဆီကို ရှယ်လိုက်တယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုံးမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်တာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ အရင်ပေါ်ကင်မရာတွေမှာ သဘာဝအလင်းရောင်သာ သုံးတယ်။ ဓါတ်ရောင်ခြည်မပါ၊ အသံလှိုင်းမပါ၊ လျှပ်စစ်မပါ။ ခေတ်ပေါ် ကင်မရာ၊ ဖုန်းနဲ့တွဲထားတဲ့ ကင်မရာတွေကလဲ ဒစ်ဂျယ်တယ်လ်နည်းသာသုံးတယ်။ အာလ်ထွာဆောင်းလည်း စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ ဓါတ်မှန်မဟုတ်ရင် ဘာမှမဖြစ်ပါ။
Cranberry (ခရင်ဘယ်ရီ) သီး
ဆီးအောင့်သူများအတွက် အလွန်ကောင်းတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ကာကွယ်ရာမှာသာ ကောင်းတယ် ဖြစ်နေတာကိုတော့ ပျောက်အောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။ အရွယ်လတ် အမျိုးသမီးတွေအတွက် ပိုသင့်တယ်။ ဆေးလုံး-ဆေးတောင့်လုပ် ရောင်းတာလဲ ရှိတယ်။
• သည်နေရာ ဝရံတာမှာ လူနာစာအုပ်လေးတွေ အစီအစဉ်နဲ့တင်၊ ဆေးတွေလဲပြင်ပြင်ဆင်ဆင်၊
• ဆေးခန်းကို ဦးစီးဆောက်ပေးတဲ့သူငယ်ချင်း လေဖြတ်နေတယ်လို့ မကြားချင်တဲ့သတင်းလည်းဝင်၊
• ရေမန်းတောင်မပေးသာလို့ လေမန်းနဲ့ကုသနိုင်တဲ့ ဆေးပညာကိုငါသင်ယူချင်။ ။
Myat Thu ကြာရင်ပြိုကျတော့မယ်နော်
ရာသီရောက်ရင် မှိုပေါက်၊ မျှစ်စို့ပေါက်
ဒါပေမယ့် အိုမင်းလာခြင်းကနေ အရာရာကိုသင်ပေးခဲ့ပြီ။ (ဂရိပညာရှင် အက်စ်ချိလပ်စ်)
Photo by Nay LA
ကျွန်တော်အိမ်လေးမှာလည်း အမှိုက်ကောက်ပေးထားပြီးပြီ။ ပုလဲကလူငယ်လူရွယ်တွေကနေလုပ်ပေးကြတာပါ။ အဲ့ (ကြွားလိုက်ရအုံးမယ်) ဒေါ်စုမပြောခင်ကတည်းကလုပ်ကြတာ။ Smile
Photo by Nay LA at4PM local time
အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေ စီးပွါးရေးနဲ့ လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက်ဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်။ လူသားရင်းမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးက အဓိကကျတယ်။
၁၉၄၉ ခုနှစ် တရုပ်ပြည်ဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီး Kavalam Madhava Panikkar (ကာဗာလမ် မဒ်ဒါဘာ ပါနီကာ) ကနေ စပြီးအဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ကွန်မြူနစ်ကိုတွန်းလှံခုခံနေကြတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကို ကူညီဘို့ရည်ရွယ်တယ်။ အမေရကန်ကနေ အကူအညီတွေရဘို့လည်းဖြစ်တယ်။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလန်ဘိုမှာကျင်းပတဲ့ ၁၉၅ဝ ဗြိတိသျှဓနသဟာယအသည်းအဝေးကနေစတင်တယ်။ ၆ နှစ်တာလို့ခန့်မှန်းပေမယ့် ၁၉၈ဝ အထိခဏခဏထပ်တိုးခဲ့တယ်။ ဒိနောက်တော့ ကာလသတ်မှတ်မှုမထားတော့ဘူး။
Colombo Plan for Cooperative Economic Development in South and Southeast Asia လို့စပြီးခေါ်တွင်တယ်။ Australia, Britain, Canada, Ceylon, India, New Zealand and Pakistan နိုင်ငံတွေပါတယ်။ ဆိုရင်အဖွဲ့အစည်း ၂၇ ခုလည်းပါသေးတယ်။ The Colombo Plan for Cooperative Economic and Social Development in Asia and the Pacific လို့နာမည်ပြောင်းလာတယ်။
Long-Term Scholarships Programme စကောလားရှစ်အစီအစဉ်၊
Drug Advisory Programme ဆေးဝါးအကြံပြုအစီအစဉ်၊
Programme for Private Sector Development ပုဂလိကအခန်းဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၊
Programme for Public Administration & Environment အရပ်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွေဖြစ်တယ်။
၂ဝ၁၄ မှာ Gender Affairs Programme လိင် (ကျား-မ) ဆိုင်ရာအစီအစဉ် ပါလာတယ်။
လက်ရှိအဖွဲ့ဝင်များ (၂၇) နိုင်ငံ
အရင်ကတော့ သပိတ်စုံ သူပုန်ထတဲ့။
အခုတော့ အမှိုက်ပုံ သူပုန်ထနေတယ်။
အစိုးရချထားတဲ့အမှိုက် ကောက်ကြတာလည်း သူပုန်ထတာပဲ။
၁။ အရှင်သိရိန္ဒ ပုလဲ ဒကာကြီး ပြန်လာစေချင်တယ်
၂။ Saw Mya Thida ဆရာ့ကို ပြန်လာစေချင်ပါတယ်ရှင့်
အရင်ပြောကြတုံးကတော့ ပြန်လာဘာလုပ်လို့စဉ်းစားနေကြောင်း ဖြေခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ သိပါပြီ။ အမှိုက်ကောက်ဖို့နဲ့ အမှိုက်မပြစ်ဖို့ပေါ့။
ဒီဇင်္ဘာ နှစ်ရက်နေ့မှာ နှစ်ယောက်နဲ့တွေ့မယ်။
နှစ်ဘာသာဖြေရမယ်ပေါ့။ နှစ်ချင်းပေါက်အောင်မှာတော့ သေချာတယ်။
တိုင်းပြည်အတွက် နှစ်နှစ်ကာကာကောင်းစေဘို့ရာ ပြောဆိုဆွေးနွေးကြမှာပါ။
လူတွေလည်း နှစ်ခြိုက်ကြမယ်၊ နှစ်မြို့ကြမယ်၊ နှစ်လိုကြမယ်၊ နှစ်ထောင်းအားရရှိကြမယ်ထင်ပါတယ်။
နှစ်ချို့တွေ၊ နှစ်ပရိစ္ဆေဒရှည်ကြာနေတဲ့ဟာတွေကလည်း အများသားမဟုတ်လား။
နှစ်သိမ့်စကားသာ မဟုတ်ပါ။ နှစ်ကုန်ရင်တော့ အောင်စာရင်းထွက်ပြီပေါ့။
Aye Kyaw Kyaw ဂျပန်က မြန်မာပြည်ကို ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာပဲ ဝင်သောင်းကြမ်းသွားတာကို စစ်လျော်ကြေးပေးတယ်။ အင်္ဂလန်က နှစ် ၁ဝဝ မြန်မာပြည်ကို ကျွန်ပြုသွားတာ ဘာဖြစ်လို့ စစ်လျော်ကြေးမပေးတာလည်းဆိုတာ ဆရာသိရင် ပြောပြပါခင်ဗျာ။
Dr. Tint Swe ကိုလိုနီလျော်ကြေးဆိုတာမရှိပါ။ ဒါပေမယ့် ဗြိတိသျှလက်အောက်ကနေ လွတ်လပ်ရေးရတဲ့နိုင်ငံတွေကို ဗြိတိသျှဓနသဟာယအသင်းဖွဲ့ပြီး ကူညီတယ်။ စစ်လျော်ကြေးဆိုတာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဆုံးတော့ လက်နက်ချနိုင်ငံကနေ ပေးဆပ်ဘို့ သဘောတူညီချက်အရ ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။
British Commonwealth ကို Commonwealth of Nations လို့လည်းခေါ်တယ်။ တချိန်က ဗြိတိသျှအင်ပါယာကနေ လွတ်လပ်ရေးရတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတယ်။ London Declaration 1949 လန်ဒန်ကြေညာချက် ၁၉၄၉ အရဖွဲ့စည်းခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ ဗြိတိသျှအစိုးရကြားမှာ ဥပဒေအရ ဆက်စပ်မှုမရှိကြပါ။ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာစကား၊ သမိုင်းကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေမှာတော့ ညီညွတ်မှု သဘောဆောင်တယ်။ Commonwealth Games အားကစားပွဲကြီးကို ၄ နှစ်တကြိမ်ကျင်းပတယ်။
ဗြိတိသျှဘုရင်မကြီးက Head of the Commonwealth ဥသျှောင်ဖြစ်တယ်။ အဖွဲ့ဝင်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေ အစည်းအဝေးရှိတယ်။ အတွင်းဝန်ရုံးရှိတယ်။ ၅၃ နိုင်ငံပါတယ်။
1. Antigua and Barbuda 1981 Realm
2. Australia 1931 Realm
3. Bahamas 1973 Realm
4. Bangladesh 1972 Republic
5. Barbados 1966 Realm
6. Belize 1981 Realm
7. Botswana 1966 Republic
8. Brunei 1984 Monarchy
9. Cameroon 1995 Republic
10. Canada 1931 Realm
11. Cyprus 1961 Republic
12. Dominica 1978 Republic
13. Fiji 1970 (rejoined in 1997 after 10 year lapse) Republic
14. Ghana 1957 Republic
15. Grenada 1974 Realm
16. Guyana 1966 Republic
17. India 1947 Republic
18. Jamaica 1962 Realm
19. Kenya 1963 Republic
20. Kiribati 1979 Republic
21. Lesotho 1966 Monarchy
22. Malawi 1964 Republic
23. Malaysia 1957 Monarchy
24. The Maldives 1982 Republic
25. Malta 1964 Republic
26. Mauritius 1968 Republic
27. Mozambique 1995 Republic
28. Namibia 1990 Republic
29. Nauru 1968 Republic
30. New Zealand 1931 Realm
31. Nigeria 1960 Republic
32. Pakistan 1947 Republic
33. Papua New Guinea 1975 Realm
34. Rwanda 2009 Republic
35. St. Christopher and Nevis 1983 Realm
36. St. Lucia 1979 Realm
37. St. Vincent and the Grenadines 1979 Realm
38. Samoa 1970 Republic
39. Seychelles 1976 Republic
40. Sierra Leone 1961 Republic
41. Singapore 1965 Republic
42. Solomon Islands 1978 Realm
43. South Africa 1931 (withdrew in 1961, rejoined in 1994) Republic
44. Sri Lanka 1948 Republic
45. Swaziland 1968 Monarchy
46. Tanzania 1961 Republic
47. Tonga 1970 Monarchy
48. Trinidad and Tobago 1962 Republic
49. Tuvalu 1978 Realm
50. United Kingdom Realm
51. Uganda 1962 Republic
52. Vanuatu 1980 Republic
53. Zambia 1964 Republic
ဗြိတိသျှလက်အောက်ကနေ လွတ်လပ်ရေးရတာမှန်ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့မဝင်ခဲ့ပါ။ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးဖိအားကြောင့် ဖြစ်တယ်။ အဲဒီကာလမှာ ကိုလိုနီဆန့်ကျင်ရေးနဲ့ လက်ဝဲအယူအဆလွှမ်းမိုးထားတယ်။ အင်္ဂလိပ် (ကုလားဖြူ) မုန်းတီးရေး နဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ထကြွအောင်လှုံ့ဆော်မှုကလည်း အကြောင်းတချက်ဖြစ်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသာ လွတ်လပ်ရေး ရစဉ်က အသက်ရှိသေးရင် တမျိုးဖြစ်မလားတော့ မပြောနိုင်ပါ။ အိန္ဒိယမှာ ကိုလိုနီဆန့်ကျင်ရေး ထိပ်ဆုံးခေါင်းဆောင် ဂန္ဒီကွယ်လွန်ပေမယ့် ဗြိတိသျှဓနဟာယထဲဝင်ခဲ့တယ်။
နိုက်ဂျီးရီးယားကို ၁၁-၁၁-၂၉၉၅ ကနေ ၂၉-၅-၁၉၉၉ အထိ ရာထူးချထားခဲ့တယ်။ ပါကစ်စတန်မှာ စစ်အာဏာသိမ်းလို့ ၁၈-၁ဝ-၁၉၉ မှာတခါနဲ့ ၂၂-၁၁-၂ဝဝ၇ မှာတခါ ရာထူးချထားခဲ့တယ်။ ဇင်္ဘာဗွေကို ၂ဝဝ၂ တုံးကရာထူးချထားတယ်။ ၂ဝဝ၃ မှာ သူ့ဖါသူထွက်သွားတယ်။ ဖီဂျီမှာလည်း စစ်အာဏာသိမ်းလို့ ၁၉၈၇ မှာ ရာထူးချထားခဲ့တယ်။ ၂ဝဝ၁ နဲ့ ၂ဝဝ၆ မှာလ ည်းထပ်လုပ်တယ်။ သီရိလင်္ကာကိုလည်း ထုတ်ပြစ်ဘို့ ဖိအားတွေပေးတယ်။ တောင်အာဖရိကကိုလည်း အရေးယူမှု လုပ်သေးတယ်။ ဂမ်ဘီယာသ ၃-၁ဝ-၂ဝ၁၃ မှာထွက်သွားတယ်။
အိန္ဒိယက အကြီးဆုံးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ ဓနသဟာယအားကစားပွဲကြီး ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဒေလီမှာကျင်းပတုံးက ကြုံခဲ့ရတယ်။
Myo Aung Poso ဂျပန်က မြန်မာကို ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့သမိုင်း အရမ်းမှေးမှိန်နေပါတယ်။
Tint Swe ဂျပန်စစ်လျော်ကြေးထဲက ဟီးနိုးဘတ်စ်ကာတွေကို လူအများသုံးရတယ်။ ရန်ကုန်-မန်းတလေးပြေး ဘတ်စ်ကားလည်း ဟီးနိုးကားနဲ့စခဲ့တယ်။ နောက်တော့ စစ်သုံးဟီးနိုးကားတွေကို တွေ့လာရတယ်။ ကျန် ဂျပန်စစ်လျော်ကြေးတွေကတော့ မဆလ လူကြီးတွေပဲသိမယ်။
ဂျပန်ကနေ စစ်လျော်ကြေးအဖြစ် ၁၆ နိုင်ငံကိုပေးခဲ့တယ်။
1. Micronesia မိုက်ခရိုနီးရှား
2. Myanmar မြန်မာ
3. Philippines ဖိလစ်ပိုင်
4. Indonesia အင်ဒိုနီးရှား
5. Laos လာအို
6. Cambodia ကမ်ဘောဒီးယား
7. Vietnam ဗီယက်နမ်
8. Korea ကိုရီးယား
9. Malaysia မလေးရှား
10. Thailand ထိုင်း
11. Taiwan တိုင်ဝမ်
12. Singapore စင်္ကာပူ
13. Holland ဟော်လန်
14. Switzerland ဆွစ်ဇာလန်
15. Denmark ဒိန်းမတ်
16. Sweden ဆွီဒင်
Myanmar 1955, 1963
18 billion Loans
10.8 billion Loans ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကို ၁၉၅၅-၁၉၆၃ အတွင်း စုစုပေါင်း ဂျပန်ယန်းငွေ ဘီလီယန် ၉ဝ ပေးတယ်။ အဲတာက ဂျပန်ဘတ်ဂျက်ရဲ့ ၉% နီးပါးရှိတယ်။ လောပိတရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံကိုလည်း ဂျပန်စစ်လျော်ကြေးထဲကနေ Nichimen Co., Ltd. ကနေ ဆောက်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။
ဂျပန်ကနေ ODA ဆိုတာလည်း နှစ်စဉ်ပေးနေခဲ့တယ်။ ၈၈ အရေးအခင်းကြီးကြောင့် ODA ဖြတ်မှပဲ လူတွေကသိရတာ။ ဘာတွေရသလည်းက စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကပဲသိမယ်။
ဒါလည်း ၂ နှစ်တိတိကတင်တဲ့စာဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်ခင်ညွန့်စာအုပ်ဟာ သမိုင်းအထောက်အထား အားထားစရာလို့ ဗိုလ်နေဝင်းမြေးက ပြောသတဲ့။
(ဂဠုန်) ဦးစောတို့ (ဘူချာ) ဗိုလ်စိန်လွင်တို့ စာအုပ်ရေးမသွားနိုင်ကြတာ နာတာဘဲ။
(ဒီပဲယင်း) ဝန်ကြီးချုပ်ဗခကစိုးဝင်းနဲ့ (ဘုန်းကြီးဆရာ၊ လက်ပတ်နီတကာ) ဦးအောင်သောင်းတို့လည်း စင်္ကာပူမှာ စာချိန်ချိန်မရလိုက်ကြဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းရာသုကတိ လားကြပါစေ။
ဒေါ်စုကို ဂျပန်ကဖိတ်ထားတယ်။ အခုဂျပန်ရောက်နေတဲ့ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ဂျပန်ဆီကနေ နည်းပညာနဲ့ စည်းစံနစ် ရလိုကြောင်းပြောတယ်။
အရင်က Made in Japan ဂျပန်ပြည်မှာလုပ်သည်ဆိုတာ အရည်အသွေးညံ့တယ်။ အင်္ဂလန်ဖြစ်နဲ့ ဂျာမဏီဖြစ်မှ ကောင်းတာကို မြန်မာပြည်သားတွေကသိကြတယ်။ စက်ဘီးစီးရင် (ရာလေး) နဲ့ (ဟမ်းဘား) ပဲစီးကြတယ်။
(မဆလ) တက်လာတော့ ဥရောပကုန်တွေမသွင်းပဲ တရုပ်ပြည်ကနေသွင်းတယ်။ (ဂရိတ်ဝေါလ်) တရုပ်မဟာတံတိုင်း တံဆိပ် ခဲတန်တွေ ညံ့လိုက်တာ။ ဂျာမဏီ ခွေးမြီးတိုနဲ့ အစပ်မဟုတ်တာကို ၅ တန်း ၆ တန်းကျောင်းသားတိုင်းက သိကြတယ်။
ကနေ့တော့ Sony (ဆိုနီ) အမှတ်တံဆိပ်ပါ ကုန်တွေကို ဘယ်သူမှ လိုက်မမီတော့ပါ။ ဂျပန်ကထုတ်ပေမဲ့ ဂျပန်နာမည် ယူမထားတာကိုပြောချင်တာ။
စာအုပ်လေးဖတ်ဘူးတယ်။ (မာဆူရာ အိုင်ဘူကာ) ဟာ Tokyo Tsushin Kogyo နာမည်နဲ့ ကက်ဆက် ရီကော်ဒါတွေ စထုတ်တယ်။ ၁၉၅၈ မှာ Sony လို့ ပြောင်းလိုက်တယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလုံးသုံးထားတယ်။ Sony နာမည်ဟာ လက်တင်လို Sonic နဲ့ Sound လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ Sonus ကနေလာတယ်။ Sonny လို့ လုပ်ရင်တော့ Boy လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ အနုမြူဗုံးနှစ်လုံးကြဲခံရပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်နဲ့ အမေရိကန်ကို အရမ်းကာရောမုန်းတီးပြီး၊ ဂျပန်မှဂျပန်လို့ မျက်ကန်းမျိုးချစ် မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဆိုနီဟာ သူမတူအောင် အောင်မြင်ခဲ့တယ်။
တွေ့နေရတယ်။ ဘားမားကနေ မြန်မာလို့ပြောင်းပြီးမှလို့ထင်တယ်။ မြန်မာချင်းမိုးမွှန်နေတာပဲ။ အဲတာ မျက်စိအကုန်မဖွင့်ပဲ အော်နေတာ။
ကြမ်းကြားလေနဲ့ နေကြရသူတွေအတွက် မနက်တပြား၊ ညတပြား၊ ငါးနှစ်စား၊
ရေးသားသူ = ဦးအေးသာအောင်၊ CRPP ၏ (၅၃)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့အထိမ်းအမှတ်
တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ၏ ပြည်ထောင်စုသဘောတရားများစာအုပ် ကောက်နုတ်စာ
ဤကမ္ဘာ၌ များစွာသော နိုင်ငံတို့သည် လူမျိုးအများအပြား ပါဝင်ပေါင်းစပ်လျက် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော်များကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြ၏။ ဤသို့ ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည့် ပြည်ထောင်စုများအနက် အချို့သော ပြည်ထောင်စုတို့၌ တန်းတူညီမျှသော အခြေခံဖြင့်ဖွဲ့စည်းကာ၊ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွါးကို အညီအမျှပြု၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ငြိမ်းချမ်းလျက်ပင်ရှိကြ၏။ ပြဿနာကြီးငယ် ပေါ်ပေါက်သည်ကိုလည်း ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းကာ ပြေငြိမ်းစေ၏။ အချို့သော ပြည်ထောင်စုများတွင်မူ အပေါ်စီးရနေသော၊ အင်အားကြီးသော၊ လူဦးရေအားဖြင့် များသောလူမျိုးများက လွဲမှားသော အမျိုးသားရေးဝါဒ ကို ကျင့်သုံးလျက် လွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်ကြ၏။ ပြည်ထောင်စုဖွဲ့ရာ၌လည်း မညီမျှသော အခွင့်အရေးများကို ပြဌာန်း ကျင့်သုံးကြ၏။ အချို့မှာမူညီမျှသော အခွင့်အရေးများကိုပင် ပြဌာန်းထားသော်လည်း၊ ထိုအခွင့်အရေးများကို ကျန်လူမျိုးများက မကျင့်သုံးနိုင်အောင် ဖိနှိပ်လွှမ်းမိုးထားကြ၏။ ထိုကြောင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေး၊ လူ့အခွင့် အရေးများတွင် မညီမျှမှုဖြစ်ပေါ်ကာ နက်ရှိုင်းသော အမျိုးသားရေး ပြဿနာ များပေါ်ပေါက်လာကြ၏။ လူမျိုးအချင်းချင်း မကြေနပ်မှု၊ မုန်းတီးမှုများ ပွားများ၍ ပဋိပက္ခများ ကျယ်ပြန့်လာ၏။ နောင်သောအခါ ပြည်ထောင်စုကြီးပါ ပြိုကွဲ ပျက်စီးရပေသည်။
ထို့အပြင်စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုစသည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အားဖြင့် အဆင့်ဆင့်ကွဲပြားနေပြီး အချို့မှာ အလွန် ခေတ်နောက်ကျလျက် ရှိနေခြင်းကြောင့်ယင်းအခြေခံများနှင့်ကိုက်ညီသောတိကျသည့်သဘောထား မူဝါဒတရပ်ကို ချမှတ်အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ရေးသည်လည်း အလွန်ခက်ခဲ နက်နဲသောပြဿနာတရပ်ဖြစ်ပေသည်။ မည်သို့ပင်ရှိစေ ဤပြဿနာကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ပကတိအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီစွာ လက်တွေ့ကျကျ ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပေသည်။ တနည်းအားဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်၏ ပြည် ထောင်စု(ဝါ) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအပေါ် သဘေားထားကိုလည်း လက်တွေ့ပြသရာလည်း ရောက်ပေသည်။
အပိုင်း (ခ) ရှိပါသေးသည်။
Photo = 12-2-1947 historic Pinlong agreement signed by Bogyoke Aung San and ethnic leaders
Colorado Springs shooting ကိုလိုရာဒိုပစ်ခတ်မှုနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်တာ ဆိုင်သလား
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကိုလိုရာဒိုမှာ ဆေးရုံတခုကို သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လူ ၃ ယောက်သေဆုံးပြီး ၉ ယောက် ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။ ဘာလို့အဲလိုပစ်သလည်း ခုထိမရှင်းလင်းသေးပါ။
Colorado Springs center ဟာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပေးနေတဲ့ဆေးရုံတခုဖြစ်နေပါတယ်။ ပစ်ခတ်မှုဟာ အဲဒီအချက်နဲ့ ဆက်နေ မနေတော့ မသိရသေးပါ။ သေနတ်သမား အသက် ၅၇ နှစ်ရှိတဲ့ (ရောဘတ် လူဝီ ဒီးယား) ကို ဖမ်းမိထားပါပြီ။ သူက အမှုတခုကိုလည်း ရင်ဆိုင်နေရသူဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီဆေးရုံရှေ့မှာ ကက်သလစ်တရားဟောဆရာက အပါတ်စဉ်လူစုလူဝေးနဲ့ ဆန္ဒပြသလိုတရားဟောလေ့ရှိပါတယ်။ သေနတ်သမားက အဲဒီလူစုထဲကတော့ မဟုတ်ပါ။
အမေရိကမှာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခွင့်ကို တရားဝင်ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်တာရော အယူအဆအမျိုးမျိုး လွတ်လပ်စွာရှိခွင့်လည်းပြုထားလို့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရေးမှာလည်း နေရာဒေသအလိုက် မတူကြပါ။
၂၄-၁-၂ဝ၁၁ နေ့က လူတွေ ရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီး ဝါရှင်တန်-ဒီစီက လမ်းမတွေပေါ်မှာ မမွေးသေးတဲ့ ကလေးတွေကို သတ်ပြစ်နေကြာကနေ အကာကွယ်ပေးကြဘို့၊ မွေးပြီးသားတွေရော မမွေးသေးသူတွေအတွက်ပါ အသက်ရှင်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးအတွက်ပါ ရပ်တည်ပေးကြဘို့ရာ ချီတက်ဆန္ဒပြကြပါတယ်။
(လီလာ-ရို့စ်) က ဒီလိုပြောပါတယ်။ (ဖီလာဒက်ဖီးယား) မှာ (ကာမစ်-ဂို့စ်နဲလ်) ကနေ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချလို့ ခါးရိုးထဲက အာရုံကျော ပျက်စီးတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက် ရှိပါတယ်။ ကျမတို့လေ့လာမှုတွေကနေ အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချလို့ သေသုံးရတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။
ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာ မွေးလာရမဲ့ကလေးတွေကို ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပြီး သတ်ပြစ်တာကို မကာကွယ်နိုင်တဲ့အတွက် ကျမနှလုံးသားထဲအထိ ထိခိုက်ပါတယ်ရှင်။ ကျမနေတဲ့နေရာနဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ပေးတဲ့ ဆေးခန်းတွေ ရှိတယ်။ နေ့တိုင်း အဲတာတွေကို လှမ်းမြင်နေရတာ စိတ်မချမ်းသာစရာ အလွန်ကောင်းလှပါတယ်။ လူအတော်များများ မသိချင်ရောင် ဆောင်နေကြသေးတယ်။ ကျမကတော့ လျှောက်ကြည့်တာဘဲ။
ကျမတို့ အဲလိုသေဆုံးနေကြရတဲ့ မမွေးလာသေးတဲ့ကလေးတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ကာကွယ်ကြရအောင်ပါ။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်ကနေ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတာကို ဥပဒေအရခွင့်ပြုခဲ့တာကို ဆန့်ကျင်ဘို့ နှစ်ပါတ်လည်နေ့မှာ ဆန္ဒပြပါမယ်။ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ လူတိုင်းအသက်ရှင်ရပ်တည်ခွင့်ဆိုတာ ပါရက်သားနဲ့ ဒီဥပဒေက ဆန့်ကျင်နေတာပါ။ တနေ့တည်းသာမကာပါဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်တာကို နေ့တိုင်းဆန့်ကျင်ပေးကြပါရှင်။
ကျွန်တော့်ပို့စ်တခု = The Winter Thunder ဆောင်းမိုးကြိုးပစ်ပါစေ
ကြော်ငြာဆေး မသင့်လို့ရေးတာကို အဲဒီဆေးဘယ်မှာဝယ်ရမလည်း မေးသလိုပဲ၊ အခုလည်း သူ့စာအုပ်သွားဝယ်မယ်တဲ့။ ဦးဝင်းတင်ရေးတာသာ ဖတ်စေချင်တာပါ။
အခုပဲ VOA ကခေါ်လို့ မေးတာတွေကို ဖြေခွင့်ရပါတယ်။
Wish list ဖြစ်စေချင်တာဘာလည်းဆိုတော့ ပြည်ထောင်စုသမတမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမတ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်လို့။
တားဆီးတာတွေကို ဘယ်လိုကျော်လွှားမလည်းမေးတော့ ၂ဝဝ၈ ဖွဲစည်းပုံကို တရားဝင်ရေးခဲ့တာက ၉-၁-၁၉၉၅ နဲ့ ဒိအရင် ၂ နှစ်ကတည်းကပါ။ သူတို့ရေးတုံးက ၂ဝ၁၅ မှာ သူတို့အကြီးအကျယ်ရှုံးမယ်၊ NLD ကအဲလို အပြတ်အသတ် နိုင်မယ်လို့ သူတို့ခေါင်းတွေထဲမှာ မရှိဘူးထင်တယ်။ NLD အနိုင်ရတာ ရက် ၂ဝ တိတိရှိပြီ၊ ဘယ်ဘာသာရေးကမှလည်း လွှမ်းမိုးမယ့် အရိပ်အရောင် တစွန်းတစမမြင်ရ၊ ဘယ်နိုင်ငံခြားကမှလည်း လွှမ်းမိုးစရာမတွေ့ရပါ။ အဲတော့ ၅၉ (စ) ဟာ လေလုံးသာ ဖြစ်တယ်လို့။
အလားအလာကကောဆိုတော့ အလားအလားတွေက တနေ့တခြား ဒီရေအလားပဲ။ နိုဝင်္ဘာ (၈) ရက်တုံးကတော့ သုည၊ အခုတော့ ၅ဝ% လို့ဖြေလိုက်ပါတယ်။
(မှတ်ချက်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်တိတိက ကျွန်တော်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်လို့ ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေ သတိပေးတာပါ။)
ကျွန်တော်တို့သားအဖကို ဖမ်းဘို့လာတာ၊ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့အတူ တိုင်းပြည်ကနေ ပြေးခဲ့ကြရတာဟာ အခုလို ဆောင်းဦးကာလ ညတွေမှာပါ။
ဒီနှစ်ဆောင်းဦးမှာ ဗိုလ်ခင်ညွန့် စာအုပ်ထုတ်ပြီး ၃ဝဝဝ နဲ့ရောင်းဘို့ လုပ်သတဲ့။ နိုင်ငံရေးသမား များများနှိပ်စက်ခဲ့သူကို ဂုဏ်ပြုတာဖြစ်တယ်။
ဗိုလ်ခင်ညွန့် နိုင်ငံရေးမလုပ်ပါ။ နိုင်ငံရေးလုပ်သူတွေကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်၊ ထောင်ချပြီး သတ်ပစ်တာသာ လုပ်ပါတယ်။
၂၈-၁၁-၂ဝ၁၅ NLD ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဆုံပွဲမှကောက်နုတ်ချက်
• လူထုကိုကျေးဇူးဆပ်တဲ့အနေနဲ့ ဒီနေ့ကစပြီး ကိုယ်စားလှယ်များအလုပ်လုပ်ကြပါ။
• အမတ်လစာထဲကလည်း ဖြတ်တောက်ပါမယ်။ ပြည်သူအတွက်အသုံးပြုပါမယ်။
• ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် သင်တန်းများလည်းအမြန်ဆုံးစတင်ပါမယ်။ စာမေးပွဲအတွက်လည်း ရေးဖြေဖြေကြရပါမယ်။ စာကျက်ထားကြပါ။
• တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များအတွက် သင်တန်းများကို ပထမဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးစတင်ပါမယ်။
• လွှတ်တော်ထဲမှာ အချိန်နဲ့အချက်အလက်နဲ့မေးတတ် မြန်းတတ်အောင် ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ထားကြပါ။
• ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ခြင်းတူညီတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်အချင်းချင်း လက်တွဲလုပ်ကြပါ။
• အဖွဲ့ချုပ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကိုင်တွယ်ပါမယ်။
• အဖွဲ့ချုပ်လူဟောင်းများကို လူသစ်များက တိုင်ပင်ပါ။ ဆွေးနွေးပါ။ ဒီလှိုင်းကိုလည်းကြိုးစားဖတ်ကြပါ။
• တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကိုင်တွယ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်လည်း စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ အရည်အချင်း တိုးတက်မှုရှိအောင် လေ့ကျင့်ပေးတယ်လို့မှတ်ပါ။
• ကိုယ်စားလှယ်များအနေနဲ့ အခက်အခဲရှိရင်လည်း လူကြီးတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတိုင်ပင်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အမှားကိုတော့ အမှန်မလုပ်ခိုင်းပါနဲ့။
• အဖွဲ့ချုပ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ယောက် အလွဲသုံးစားပြုလုပ်လို့ ဥပဒေအရ အရေးယူခံရမယ်ဆိုရင်လည်း ထောင်ဝင်စာတွေ့ဖို့တော့ လူလွှတ်ပေးပါမယ်။ (Credits: Soe July)